Raveloaritiana Mamisoa · Febroary 2013 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Febroary, 2013
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Febroary 2011 · 2825 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Febroary, 2013
Tafaray Ao Shahbag Ny Bangladesy Noho Ny Faha- 42 Taonan'ny Heloka An'ady
Azia Atsimo18 Febroary 2013
Tsikelikely, nanjary ranomasimben'ny olona ny fiolanana Shahbag ao andrenivohitry Bangladesh, ao Dhaka, ho fitakiana ny rariny noho ireo habibiana niseho nandritra ny tolom-panafahana tamin'ny taona 1971 sy ho fitakiana ny fanasaziana ho faty ireo meloka an'ady. Araka ny filazan'ny sasany, tombanana ho 500.000 tsy latsaka eo no isan'ireo olona tonga ao Shahbag. Folo andro lasa izay, niantso ireo...
Nosamborina fa Voampanga Noho ny Fanarahana ny “Mpaka Fanahy” Ilay mpisera Twitter Saodiana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana18 Febroary 2013
Nosamborina indray i Bader Thawab, mpisera Twitter Saodiana tamin'ny volana Septambra 2012 satria nanoratra sioka miantso ho amin'ny fanonganana ny fitondram-panjaka Saodiana. Anisan'ireo nandefa sioka mivantana ny fandehan'ny fangalana am-bavany fohy voalohany nandritra ny fotoam-pitsaranan'ny Fikambanana Saodiana miaro ny Zo sivily sy politika (ACPRA) izy. Niezaka ny hahazo ny dika mitovy amin'ny...
Instagram An'ny Filoha Tchetchen?
Eoropa Afovoany & Atsinanana17 Febroary 2013
Sarotra ny hahamarika ny kaonty Instagram an'i alihan777 amin'ny voalohany. Nahamarika ilay anaram-bositra tamin'ny alalan'ny siokan'ny namana ilay mpanentana malaza ao amin'ny fahitalavitra Rosiana Tina Kandelaki tamin'ny 8 Janoary 2013, saingy tsy nanome famantarana momba izay tompony. http://instagram.com/p/Vr8cVoL5zb/ Hatramin'ny voalohany, anefa , nibaribary fa na nohavaozin'ny filoha Chechen Ramzan Kadyrov, na ny mpampita vaovaony, na...
Nosamborina Ireo Vehivavy Saodiana Mpanao Fihetsiketsehana Satria “Manohintohina Ny Fampandrosoana”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana14 Febroary 2013
Tamin'ny Asabotsy 9 Febroary lasa teo, nikarakara fihetsiketsehana madinika teo anoloan'ny tranoben'ny Vaomieran'ny Zon'Olombelona ao Riyadh, Arabia Saodita ny andiana zaza amam-behivavy, anisan'izany ny vady, zanaka vavy sy renibe an'i Suliman al-Rushoodi, filohan'ny Fikambanana Mpiaro ny Zo sivily sy politika Saodiana izay nogadraina. Vadin'i al-Rushoodi, @omamar1, nandrakitra lahatsary tamin'ny fihetsiketsehana izay nakambana...
Niavaka Ny Isan'ireo Vehivavy Bangladesy Tonga Namonjy ny Fihetsiketsehana Tao Shahbag
Bangladesh14 Febroary 2013
Tsy ny lehilahy Bangladesy ihany no mibodo ny lalana fiholanana Shahbag ao an-drenivohitra Dhaka mba hitaky sazy farany izay henjana indrindra ho an'ireo meloka an'ady. Nahitana ny fandraisan'anjara mahagaga avy amin'ireo vehivavy ihany koa ny fihetsiketsehana. Mpianatra, mpiasa, sy renim-pianakaviana miaraka amin'ireo zanany no tonga nitondra ny feony nandritra ny fihetsiketsehana Shahbag,...
Mpanao Fihetsiketsehana Nandoro Ny Tenany, Mankalaza ny Fahatsiarovana ny Revolisiona i Yemen
Andro vitsy mialoha ny faharoa-taona nitsingerenan'ny revolisiona Yemena, nanao sorona ny tenany tamin'ny fandoroana azy i Munif Al-Zubairy tao andrenivohitra Sanaa, mba haneho firaisankina amin'ireo revolisionera naratra tao amin'ny firenena. Atiaf Al Wazir nisioka hoe: @WomanfromYemen: Androany atoandro, nanao sorona ny tenany tamin'ny fandoroana azy i Muneef alzubairi, ho fanoherana ny tsy fandraisan'ny...
Kolombia: Mbola Mipoapoaka Ny Basy ao Medellín
Kolombia13 Febroary 2013
Miatrika toe-draharaha sarotra momba ny filaminam-bahoaka ny tanànan'i Medellin. Ao Comuna 13 [es] no faritra tena voantonontonona, andrenesana fifandonana marobe isak'alina [es] tamin'ny fiandohan'ny herinandro tamin'ny volana Febroary. Nanjary niha-ratsy hatrany ny toe-draharaha satria noterena nampiato ny asany mandritra ny 15 minitra ny Fiaratariby [fanamarihan'ny mpandika: fiara mandeha amin'ny tariby mihantona)]. Olona roa no naratra noho ny bala votsotra...
Bangladesh: Mankao Shahbagh Avokoa ny Lalana Rehetra
Azia Atsimo12 Febroary 2013
Ao Shahbagh, mandray andraikitra ny tanora ary nampitsahatra ny resaka politika tamin'ny andro fahaefatry ny hetsika. Mpanao fihetsiketsehana an'arivony no manohy mibodo ny arabe fiolanana midadasika indrindra ao andrenivohitr'i Bangladesh, ao Dhaka mba hitaky sazy farany izay henjana indrindra ho an'i Abdul Quader Mollah, lehiben'ny antoko Islamista sy ho an'ireo olon-kafa voampanga...
Meksika12 Febroary 2013
Fahamendrehana, Herim-po ary Fihatsaram-belatsihy: Lehilahy Ejyptiana Naboridanin'ny Polisy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana12 Febroary 2013
Hamada Saber no anaran'ilay lehilahy Ejyptiana, hita taminà lahasary niparitaka sy nandeha tao amin'ny fahitalavitra CNN ihany koa, lahasary mampiseho azy novonoina sy naboridanin'ireo mpitandro filaminana. Nitarika fahatezerana sy tsy finoana izany ary nampisafoaka ny firenena tao anatin'ny rikoriko. Mahaliana, olona marobe tao amin'ny media sosialy no nanomboka nanohitra ny...